၂၀၂၀ မှာ iPhone တွေ ဘယ်နှစ်မျိုးထုတ်နိုင်မလဲ တွေးမိသလောက် - PX
ဒီရက်ပိုင်း Apple နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေ အတော်ထွက်တယ်။ ဒါပေမယ့် သတင်းဆိုတာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆက်စပ်မှုရှိမှ ရလဒ်ကို ခန့်မှန်းလို့ရမှာမလား။ အောက်က သတင်း ၄ ခုကို တစ်ချက်ကြည့်ကြတာပေါ့။
“Apple က တစ်နှစ်ကို ဖုန်း ၂ ကြိမ်ထုတ်တော့မယ်”
Fan တစ်ယောက်အနေနဲ့ သဘောမကျပေမယ့် Market အရတော့ ဖြစ်သင့်တယ်ထင်တယ်။ ပြိုင်ဘက်တွေက Main Flagship တွေနဲ့ စျေးကွက် Attention ကို ၁ နှစ် ၂ခါ (Galaxy S & Note, Huawei P & Mate) အနည်းဆုံးဝင်ချိန်မှာ Apple အတွက် အဓိကမျှော်ရတာက September Event တစ်ခုပဲဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂ ကြိမ်ထုတ်ဖို့ဆိုပြီး S Series ကို ဘာမှသိပ်မထူးခြားပဲ စျေးကြီးကြီးနဲ့ထပ်ထုတ်ရင်တော့ အလုပ်ဖြစ်မယ်မထင်။
“2020 မှာ 5.4″ iPhone တွေ လာမယ်”
ဒီသတင်းကိုလည်း သိပ်ဘဝင်မကျဘူး။ ဒီဘက်ခေတ်မှာ Compact Phone တစ်လုံးအတွက် အသင့်တော်ဆုံး Size က 5.8″ လို့ ပြောလို့ရတယ်။ FullView တွေထဲမှာ Xperia XZ2 Compact လို 5″ ဖုန်းမျိုးရှိခဲ့ပေမယ့် Apple ရဲ့ Pro Model ဖုန်းတစ်လုံးကို အရမ်း Size သေးလိုက်ရင် Battery မခံတာ၊ ဖုန်းက ပိုထူလာတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
အပေါ်က သတင်း ၂ ခုက ကောလဟာလ သက်သက်လား? ဖြစ်နိုင်ခြေတော့ရှိတယ်။ ခုပြောမယ့် တတိယသတင်းအရဆိုရင်ပေါ့။
“iPhone Model ၄ မျိုးအထိ ရှိလာတော့မယ်”
လက်ရှိမှာ အဓိက iPhone Model ၃ မျိုးရှိတယ်၊ ရိုးရိုး၊ Pro နဲ့ Pro Max. Tailosive Tech က ပြောသလို 5.4″ iPhone ဆိုတာ Pro Model မဟုတ်ပဲ ရိုးရိုး Budget iPhone နေရာမှာ SE ကို အစားထိုးမယ်ဆိုရင်ရော?
ဒါဆိုရင် Apple အနေနဲ့ ၁ နှစ်မှာ ဖုန်း ၂ သုတ်ထုတ်ရောင်းမယ့် Plan ကြီးက သေချာသထက် သေချာနေပြီ။ လက်ရှိ SE Series က Fan တွေအတွက်ကောင်းပေမယ့် Apple အတွက်တော့ အမြတ်နဲတဲ့ Series ဆို ပိုမှန်မယ်။ ဒါပေမယ့် ရိုးရိုး iPhone တွေကလည်း Apple ရဲ့ အဓိကရောင်းအားဖြစ်နေတယ်။ ဒါဆို SE နဲ့ ရိုးရိုး (ဒါမှမဟုတ် ဟိုးအရင်ကနာမည်ပေးသလို 12 & 12+) ဆိုပြီး ခွဲထုတ်လိုက်ရင် Apple ဟာ တစ်နှစ်ထဲမှာ ဖုန်း ၂ ခါထုတ်မယ့် Plan က ပိုပြီးဖြစ်နိုင်သွားပြီလို့ထင်တယ်။
“iPhone 12 မှာ LCD အစား OLED သုံးမယ်”
ဒီသတင်းက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ သေချာတာက 12 ရဲ့ Pro Model တွေမှာ 120Hz Display သုံးမယ်ဆိုတာ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ Feature ကို ရိုးရိုး 12 သမားတွေ (12 SE သမားတွေရော) ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဆို ဘာလို့ OLED သုံးမှာလဲ? What if “In-display fingerprint?”
2020 မှာ Apple က iPhone အလုံးရေ သန်း ၁၀၀ ရောင်းနိုင်ဖို့လုပ်မယ်ဆိုတာ လေပစ်ရုံသက်သက် မဖြစ်နိုင်။ တကယ်လို့များ ရိုးရိုး iPhone တွေကို In-Display Touch ID ထည့်ပေးပြီး Face ID ကို Pro အတွက် ခွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ရိုးရိုး iPhone ရောင်းအားက ဆောင့်တက်သွားဖို့ အလားအလာများတယ်။
ကိုယ့်အမြင်အရဆို 5.4″ က 720p, 6.1″ က 1080p, Pro တွေက 120Hz နဲ့။ စျေးအရလည်း ရိုးရိုး Model တွေကို $700, $800 နဲ့ ရောင်းပေးလိုက်ရင် Pro တွေကို 5G ထည့်ပေးပြီး $1000 အထက် စျေးတောင်းလို့ရသွားပြီပေါ့။
တစ်ချို့တွေလေပစ်သလို Apple ကျဆုံးခန်းရောက်ဖို့ဆိုတာ အဝေးကြီးမှာပဲရှိပါသေးတယ်။ အပေါ်ကသတင်းတွေလိုသာ Market ရဲ့လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့ရင် 2020 ဟာ Apple အတွက် အလှပဆုံးနှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်လာဖို့ သေချာသလောက်ရှိနေပြန်ပါပြီလေ။